Bubble Pop, lalao manohitra ny fahasosorana tsotra | Androidsis
Bubble Pop, lalao manohitra ny fahasosorana tsotra
Rafa Rodriguez Ballesteros | | Lalao Android
Ny zavatra voalohany tadiavintsika lalao tsotra ho an'ny finday avo lenta dia izy no mahavita mandany fotoana hiandrasana bebe kokoa. Na hoe manelingelina antsika izany ary mahatonga antsika manaova fotoana mahafinaritra amin'ny fotoana mahasosotra anao tafahoatra. Fakur Games dia manolotra antsika Pop Bub, lalao tsotra nahavita nampiala-voly anay vetivety, ary famantarana tsara izany.
Tsy dia be siansa io, tsy manana torolàlana be dia be, ary zavatra tsara izany. Tsy tianay ny mahita lalao izay tokony hamakianao, na hahatakatra ny "fitsipika" alohan'ny hanombohanao milalao. Rehefa mametraka lalao amin'ny finday avo lenta isika dia te-hilalao amin'ny minitra voalohany, ary izany no nataontsika tamin'ny Bulbe Pop.
Atsaharo amin'ny fotoana fohy indrindra izay azonao atao
Manazava tsara ny anarany Momba ny inona ny lalao, pop bubble. Tsy misy manahirana fa tsy misy tsy fahasarotana. Buble Pop dia lalao iray ilaina amin'ny finday avo lenta. Ny filaharana any amin'ny banky, ny ora ao anaty bus, na ny fotoana kely hisotroana kafe dia tsy ho entina intsony. Mandehana mandringana ambaratonga sarotra kokoa ary miezaha hanao ny zavatra rehetra tsy mandany fotoana.
Ao amin'ny «Bubble Pop» no ahitantsika bubble misy loko isan-karazany. Araka ny lokon'ny tsirairay afaka manampy isa isika tsirairay avy, na misy isa marobe. Na ny mifanohitra amin'izay, raha manararaotra ireo izay tsy tokony hataontsika isika afaka mamoy azy ireo isika. ny tanjona tsotra sy mazava izy io, mahazoa ireo hevitra ampy ho an'ny mandehana amin'ny ambaratonga manaraka. Ny fahombiazany dia mitoetra amin'ny fahatsoran'ny tanjona sy ao ambaratonga fohy izay mamporisika anao hanohy hilalao.
Tena tsara ny mihazakazaka mankao amin'ny Google Play Store miaraka lalaos amin'ity karazana ity "Namboarina tany Espana". Ao amin'ny asany fohy, ny orinasa Lalao Fakur, dia nahomby ary navoaka tamin'ny lalao teo aloha. Ny formula Bubble Pop, manolotra vokatra manintona ny mpanjifa. Ary raha lalao izy io, ary mahaliana sy mampiala voly antsika, tratra ny tanjona.
Raha te hanana ianao lalao tsy misy aretin'andoha. Raiso ny reflexes amin'ny fanandramana ary fanamby ho haingana ianao, tena ilaina i Bubble Pop. Aza manantena blockbusters lehibe, na torolàlana sy fitsipika tsy misy farany. Mametraka sy milalao !!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Bubble Pop, lalao manohitra ny fahasosorana tsotra
Android tsy mamaly fampandrenesana, tariby tapaka
Ahoana ny fomba fampandehanana na famonoana ny fandefasana antso amin'ny Android